'तीन चरणको निर्वाचन पछि देशमा रोजगारको सिर्जना हुन्छ' : श्रम तथा रोजगार मन्त्री मन्सुर - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘तीन चरणको निर्वाचन पछि देशमा रोजगारको सिर्जना हुन्छ’ : श्रम तथा रोजगार मन्त्री मन्सुर
Posted by Headline Nepal | १८ भाद्र २०७४, आईतवार ११:३७ |
प्रदेश नं २ मा हुन गईरहेको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको तयारी के कस्तो छ ? केके योजना बनाएर काम भैरहेको छ तथा मन्त्री भएर आईसकेपछि केकस्ता कामहरु गरियो भन्ने बारे समासामयिक विषयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्ला मन्सुरसँग हेडलाईन नेपालले गरेको कुराकानी:
मन्त्री ज्यु व्यस्तता के मा छ यतिबेला तपाईको ?
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य हुँ । प्रदेश नं २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि नजिकिँदै छ । त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाली काँग्रेसका उमेद्वारहरु चयनका लागि बैठक चलिरहेको छ । त्यसकारण त्यो बैठकमाहरुमा सहभागि भैरहेको छु । र मन्त्रीको हैसियतले मन्त्रालयको कामहरु गरिरहेको छु । यसमा नै व्यस्त छु ।
प्रदेश नं २ मा उमेद्वार टुंगो लगाउन निकै धौधौ परिरहेको भन्ने छ नि नेपाली काँग्रेसमा ? कत्तिको धौधौ परिरहेको छ ?
हैन । यो जानकारी नभएका व्यक्तिहरुको भनाई हो । आठै जिल्लाको बस्ती स्थिती, त्यहाँका नेताहरुसँग हामीले बुझ्यौं । २ नं प्रदेशका केन्द्रिय सदस्यहरु महामन्त्री, पार्टीका नेता विमेलन्द्र निधिहरुसँग हामी बस्यौँ । त्यसमा ६० प्रतिशत उमेद्वारहरुको नाम मेयर, उपमेयरमा आएको छ भने केही ठाउँमा अथावा २५ प्रतिशत जति ठाउँमा एक भन्दा बढि उमेद्वारहरुको नाम आएको छ । यो ठाउँमा निर्णय हुन बाँकि छ, त्यहि कुरा मिलाईदिने मात्र हो हामीले । यसलाई कुनै सकस मान्ने हैन । नेपाली काँग्रेस ठुलो पार्टी छ । २० औं वर्षदेखि यसमा लागिपरेका उमेद्वारहरु छन् । अरु पार्टीलाई उमेद्वार खोज्नुपर्छ । हामीलाई त्यो समस्या पर्दैन । पार्टीमा काम गरेका कार्यकर्ताहरुले ईच्छा, आकांक्षा राख्नु स्वभाविक हो, यसलाई व्यवस्थापन गर्नु नेतृत्वको काम हो । त्यो हामीले गरेका छौँ ।
मन्त्री भईसकेपछि तपाईँको व्यक्तिगत कुरा मन्त्री भईसकेपछि तपाईँको गतिविधीले निर्वाचनमा र तपाईँको व्यक्तिगत व्यक्तिगत प्रोफाईलमा समेत भोलीका दिनमा असर पर्न सक्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
चालीस लाखभन्दा माथि युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्, देशभित्र रोजगारको सम्भावना नभएकाले । त्यो उनका परिवार ३ जनाको हिसाबले जोड्ने हो भने पनि १ करोड २० लाख जनसङ्ख्या विदेश जान्छन् । ३ करोड हाराहारीको हाम्रो जनसङ्ख्यामाआधा भन्दा बढि वैदेशिक रोजगारीमा छन् । यसमा पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरु बढि भन्दा बढि अत्यन्त गरिविको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरु जो जग्गा धितो राखेर विदेश गएका हुन्छन्, विदेश जाँदा पनि गाउँदेखि नै दलालबाट ठगिने अवस्था अझै छ । राज्यले गरेको निर्णयभन्दा बढि पैसा तिरेर जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले आर्थिक रुपले अत्यन्त गरिवीको रेखामुनि रहेका परिवारहरु आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्न अत्यन्त कठिन परिस्थितीको सामना गरेर पैसा कमाएर ल्याएर आफ्नो परिवारलाई आर्थिक रुपले सम्पन्न गराउँछु भन्ने आफ्ना घरसम्पति धितो राखेर जानेहरुको लागि कामलाई कसरी ठगिरहित, सुरक्षित, मर्यादित र अधिकतम लाभदायिक बनाउन सकिन्छ? , कहाँ त्रुटि छ यसको विश्लेषण गरेर, गलत गर्नेहरुलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर, र ठगिएकाहरु जो न्यायको खोजिमा मन्त्रालय पुगेका हुन्छन् यीनिहरुलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिलाउने काम गरिरहेको छु । र वैदेशिक रोजगारलाई अझ व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदाअनुरुप मन्त्रालयमा काम भैरहेको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु ठगिरहन्छन् । यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न पनि काम गरिरहेका छौँ ।
एकातिर व्यवसायीहरुले व्यवसायलाई अघि बढाउन निकै गाह्रो भएको र अर्कातिर कामदारहरुले अण्डरटेवल काम हरु भैरहेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । मन्त्री भएर आउँदै गर्दा तपाईँले यसलाई कडाईका साथ निरिक्षण गर्छु, नियन्त्रण गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो । तर अहिले पनि यो पूर्ण रुपमा लागु नभएको जस्तो छ, गुनासाहरु आईरहेकै छन्, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
राज्यले फ्रि टिकट फ्रि भिषाको निर्णय गर्नुको पछाडि मुल कुरा, आर्थिक रुपले कमजोर रहेका मानिसहरु रोजगारका लागि कम पैसामा जान पाउन भन्ने मुख्य उदेश्य थियो । यो निर्णयको आधारमा व्यवसायमा फाईदा छैन भने त्यो व्यवसाय नगर्दा हुन्छ । तर सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने हो । त्यसैले आग्रह गर्दछु, व्यवसायीहरुले राम्रो काम गर्नुपर्यौ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्किृत गर्ने पनि योजना बनाएको छु । र ठगिएकाहरु जो न्यायको खोजिमा मन्त्रालय पुगेका हुन्छन् यीनिहरुलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिलाउने काम गरिरहेको छु । र वैदेशिक रोजगारलाई अझ व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदाअनुरुप मन्त्रालयमा काम भैरहेको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु ठगिरहन्छन् । यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न पनि काम गरिरहेका छौँ ।
अहिले जसरी रेमिट्यान्सले देशलाई टेवा दिईरहेको अवस्था छ, यसले दिर्घकालमा राम्रो गर्दैन भन्ने कुरा छ । अहिले हजुर मन्त्री भएर आएपछि भित्रीकुराहरु धेरै देखिरहनुभएको छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
देश भित्र राजनैतिक स्थिरता भएन, औद्योगिक विकास भएन किन भने हामी १० वर्षसम्म राजनैतिक लडाईँमा थियौँ । त्यसकारणले देशमा रोजगारीको अवस्था नभएर विदेश जाने बाध्यता थियो । अब अहिले आएर हामीले राजनैतिक लडाईँ अन्त्य गरेका छौँ । अहिले अवसर आएको छ, मंसिर १० गतेसम्म ३ चरणको चुनाव भएपछि संविधान कार्यान्वयन गर्दै देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने र राजनैतिक लडाईँ अन्त्य गर्ने अवसर हामी नेपालीले पाएका छौँ । त्यो भएपछि देशभित्रै रोजगार प्राप्त हुन्छ ।
संविधान संशोधनको विषय फेरी अघि बढ्ने सम्भावना रहन्छ कि रहन्न ? अब हामी संविधान कार्यान्वयन तर्फ कसरी अघि बढ्न सक्छौँ ?
संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेस हुँदा एमालेले अप्रजातान्त्रीक ढङ्गले यसलाई छेक्ने काम गर्यो । केही यस्ता पार्टीहरु छन् जो जनताविरोधी पार्टीहरु छन् । यो देशमा शान्ती होस्, संविधान कार्यान्वयन होस् भन्ने पक्षमा उनीहरु छैनन् । जनताले सुख पाउने पक्षमा उनीहरु छैनन् । किनकी यसको जस काँग्रेसले लिन्छ भनेर उनीहरु यसको विरुद्धमा छन् ।
पहिलो संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउदाले यसको औचित्य के छ भनेर खोजेको थियो । मधेशले संविधान जलाएको थियो । तर अहिले आएर संविधान संशोधनले देशलाई शान्ती दिलाउछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
Previousउत्तर कोरियामा ठूलो भूकम्प, परमाणु परीक्षणले भूकम्प गएको अनुमान
Nextबाढीपीडितलाई जापानबाट आर्थिक सहयोग
लामा विरुद्ध लगाइएको यातना सम्वन्धि दुई मध्ये एउटा मुद्दामा सफाइ !
१८ श्रावण २०७३, मंगलवार ०६:५५
पतिको रोग पालेर बाँचिरहेको छु
१७ मंसिर २०७३, शुक्रबार ०८:५७
मध्यपुर थिमि नगरपालिका मेयरमा एमालेको अग्रता
८ जेष्ठ २०७४, सोमबार ०९:४७
इटालीको दोस्रो जित ! मेसेडोनिया ३–२ ले विजयी
२४ आश्विन २०७३, सोमबार ०७:५२